လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: May 2013
Loaris Trojan Remover 1.2.8.4 Final
Friday, May 31, 2013 Anti-virus & Security
ကျနော်တို့ရဲ့ ဝင်းဒိုးတွေထဲမှာ Trojan လို့ခေါ်တဲ့ စက်ကိုလေးအောင်၊ ဟမ်းအောင် လုပ်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တမျိုးကို ဒီ Loaris Trojan Remover လေးက ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်..။ ဒီကောင်လေးက နောက်ဆုံးထွက် Update လေး Loaris Trojan Remover 1.2.8.4 Final ဗါးရှင်းပါ..။ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရအောင် ဒေါင်းလော့ဖိုင်ထဲမှာ crack ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်..။ crack ဖိုင်ထည့်ပြီးလို့ ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက်ကို ပိတ်ထားရမှာပါ..။ ဒါမှ
Nero Multimedia Suite v12.5.01900 Platinum For Win Xp vista78
Friday, May 31, 2013 Multimedia
Nero Multimedia Suite နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးပါ လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းတော်တော်လေး ကိုစုံလင်ပါတယ် ခွေကူးတာ ခွေဘမ်းတာ ဗီဒီယို တည်းဖြတ်တာ ဓာတ်ပုံနဲ့သီချင်းတွဲပြီးတော့ MP4 လုပ်တာ အသံရီကော့လုပ်တာ Backup လုပ်တာ စသည်ဖြင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေ လည်းပါရှိပါတယ်
Sony Xperia L 4.1.2 ကို အလွယ်ကူဆုံး root လုပ်ကြမယ်
Friday, May 31, 2013 Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ
ဒေါင်းပြီးတော့ ဖုန်းတဲသွင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ ပြီးရင် အဲဒီဆော့ဝဲကို ဖွင့်ပြီးတော့
မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ...
Friday, May 31, 2013 E-Book များ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အာကာဖြိုး (နည်းပညာ) ရေးသားထားတဲ့ မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ စာအုပ်ကို အရင်ကတင်ပေးပြီးသားပါ လင့်သေသွားလို့ ပြန်တင်ပေးဖို့ တောင်းထားတဲ့ အတွက် Sharebeast, Minus နှစ်နေရာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
1500 တန် CDMA ဖုန်းများအတွက် Internet Settings ထည့်နည်း
Friday, May 31, 2013 Android Apps & Games
Myanmar Mobile App Store ကနေ ကူးယူဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ 1500 တန်ဖုန်းတွေမှာ အင်တာနက် Setting ထည့်သွင်းနည်းပါ။ မသိသေးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Android ဖုန်းတွေအတွက် Setting ချိန်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ သိပြီးသားလူတွေအတွက် ကတော့ ကျော်သွား လိုက်ပေါ့နော်။ :D
Internet Setting ထည့်နည်း
၂ – Wireless & networks ထဲဝင်ပါ (သို့မဟုတ်) Android version 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများဖြစ်ပါက Wireless & Network ကဏ္ဍအောက်က More… ထဲသို့ဝင်ပါ။
၆ – အောက်ပါအတိုင်းလိုက်ဖြည့်ပါ
Proxy – ဘာမှမထည့်ပါ
Port – ဘာမှမထည့်ပါ
Server – ဘာမှမထည့်ပါ
MMSC – ဘာမှမထည့်ပါ
MMS Proxy – ဘာမှမထည့်ပါ
MMS Port -ဘာမှမထည့်ပါ
ဒါဆိုရင် အင်တာနက် setting ထည့်ခြင်းအဆင့်ပြီးပါပြီ။
ဖုန်းအင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကို ဖွင့်နည်း
ဒါဆိုရင် သင့်ဖုန်းရဲ့ Notification Bar ( အပေါ်ဘက် လိုင်းအားပြသောနေရာ နံဘေး) တွင် အပေါ်တက် အောက်ဆင်း မြှားလေးတစ်ခု ပေါ်လာပါ့မယ် အင်တာနက်စသုံးလို့ရပါပြီ။
ကြိုက်သလို Share လုပ် နိုင်ပါသည်... ကျေးဇူးပြု၍ Like ပေးပါအုံး
Kaspersky ကို PC သမားအားလုံးနီးပါးသိကြပါတယ်.. Antivirus လောကမှာ ဆရာတစ်ဆူလိုပါပဲ.. အဲဒီ Kaspersky ကပဲ Kaspersky Mobile Security ကိုထုတ်နေတာ အတော်ကြာပါပြီ.. ခု v9.10.141 ရလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Update လုပ်ဖို့တော့ Internet Connection လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်..
အပန်းဖြေစရာ Glazastik Finch ရဲ့ ဓါတ်ပုံလက်ရာများ.....
Thursday, May 30, 2013 ဓါတ်ပုံ
တက်တူးချစ်သူများ - ၁
Thursday, May 30, 2013 အနုပညာလက်ရာ
အံ့ဖွယ် ကျောက်တောင် တက်သမားများ.....
Thursday, May 30, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ
အမေရိကန်နိုင်ငံက PTR-91 Semi-Automatic Rifle စက်ရုံတခု.....
Thursday, May 30, 2013 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
Graphic Ebook များ ပေါင်းစည်းခြင်း.....
Thursday, May 30, 2013 E-Book များ
စာအုပ်အမည် = Using Matlab & Simulink
ရေးသားသူ = ဦးအောင်မြင့်
ဒါကတော့ သင်္ချာနှင့်ပါတ်သက်ပြီး တွက်ချက်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ Matlab အကြောင်း အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ပါ။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Zippyshare | Solidfiles | Ziddu | Filecloud | Sharebeast | Mirrorcreator
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း 4G ကွန်ယက်အား နိုဝင်ဘာလတွင် အပြီးသတ် ဆောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်ကုမ္ပဏီများမှ ပြောကြား...
Thursday, May 30, 2013 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လျှောက်ထားမှုတွင် ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Sumitomo Corporation နှင့် NEC Coporation တို့မှ NTT Communications Coporation နှင့် ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အရေးပေါ် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် တည်ဆောက်မှုအတွက် မြန်မာ့ သတင်းအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြောင်း Sumitomo ကုမ္ပဏီမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာရဲ့ USB Port တွေကို Removable Access Tool နဲ့ Lock ချထားရအောင်....
Thursday, May 30, 2013 Windows OS ဆိုင်ရာ
Filled under: Files Copy Protecter, နည်းလမ်းများ, ဗဟုသုတ
ကိုယ်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ သူများက USB Stick တွေ လာလာထိုးတာ မကြိုက်သူများအတွက် Removable Access Tool နဲ့ Lock ချထားလို့ရပါတယ်.. လုပ်ရတာလည်းလွယ်ပါတယ်..
1. USB ကို လုံးဝ ထိုးမရအောင် လုပ်ထားမလား..
The Cleaner 9.0.0.1105 DC 26.05.2013...
Thursday, May 30, 2013 Anti-virus & Security
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ... ခုဖော်ပြပေးမဲ့ Cleaner ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ တော်တော်လေးပြည့်စုံကောင်းမွန်သလို ဖိုင်ဆိုက်လေးကလည်း 269.29 MB ရှိပြီး တော်တော်လေးကြီးပါတယ်။ မိမိစက်ထဲမှ ရှင်းလိုသမျှကို ကလစ်တစ်ချက်လေးနဲ့ပြီးမြောက်စေမှာပါ။ keylogger,password တွေကအစ ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ virus တွေ က block လုပ်ထားသမျှကိုလည်း အကောင်းဆုံးပြင်စင်ပေးမှာပါ။ Anti virus ဆော့ဝဲလ်လေးမျိုးလည်း
Funny Photo Maker 2.4.1 Full Cracked....
Thursday, May 30, 2013 Multimedia
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Funny Photo Maker ဆိုရင် တော်တော်များများသိကြပြီးသားပါ... မိမိတို့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို Funny ဒီဇိုင်းအလန်းလေးတွေ အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Download ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Easy Office Recovery 2.0...
မင်္ဂလာပါ office Recovery လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတို့မှားဖျက်မိတဲ့ office ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ပြီး Restore ပြန်လုပ်ပေးမှာပါ။ ပျက်စီးသွားတဲ့ file တွေကိုလည်း ပြန်လည်ပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ Microsoft Office documents ရဲ့ DOC, DOCX. XLS, XLSX, PST, PPT ဖိုင် Format တွေကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Word, Excel, PowerPoint and Outlook files ဖိုင်တွေကိုတော့ ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မှားဖျက်မိတဲ့ Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Outlook files တွေကိုတော့ ပြန်လည်ပြီး Restore လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ Full Version လေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်အောင် Registration key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ စမ်းသပ် အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်လေးမှ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Home Page - http://www.munsoft.com
Wednesday, May 29, 2013 ထွေရာလေးပါး
internet/Odd Stuff Magazine/izismile
Nero Multimedia Suite v12.5.01900 Platinum For Win...
1500 တန် CDMA ဖုန်းများအတွက် Internet Settings ထည့...
အမေရိကန်နိုင်ငံက PTR-91 Semi-Automatic Rifle စက်ရု...
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း 4G ကွန်ယက်အား နိုဝင်ဘာလတွင် အြ...
Internet Download Manager 6.15 Build 14 Final နှင့...
Internet Download Manager 6.15 Build 14 Final(5.10...
Wise Data Recovery 3.36 Build 178 For Pc (2.2 Mb)
ဗီဒီယိုချက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Video2Webcam 3.4....
ကြံကြံဖန်ဖန် တီထွင်ထားတဲ့ ထူးဆန်းစက်ဘီးများ.....
အသားညှပ်ပေါင်မုန့် (Sandwich) နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနု...
Christoph Hyuet ရဲ့ ဖန်တီးမှုလက်ရာဆန်း.....
ကော်ဖီခွက်ထဲက 3D အနုပညာလက်ရာ...
Innocent Poor Pets.....
DropBox 50GB ရအောင်လုပ်နည်း....
PC Tools Registry Mechanic Full....
ESET NOD32 Antivirus and Smart Security 6.0.308.0....
AVG Serial Keys....
Window 8 Product Keys.....
Internet Download Manager Serial Keys....
ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM4SERIAL KEYS....
USB ကနေတဆင့် ကူးစက်တဲ့ အန္တယ်ရာယ်တွေကို ရာနှုန်းပြည်...
(Anti-Mosquito) ခြင်ပြေးတဲ့ Software လေးပါ...
Wondershare MobileGo for Android 3.2.0.215...
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရိုးရာနံနက်စာ စားသောက်ဖွယ်များ.......
Frozen Keyboard Pro v 0.5.3 for android....
SUPERAntiSpyware Professional 5.6.1020...
စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ရာဘာဖိနပ်အဟောင်းတွေကို စုဆောင်းပြီး...
သီချင်းဖန်တီးချင်သူများတွက် Music Maker လေးပါ........
How to Install Myanmar Font On Samsung Galaxy S4-i...
DX တူးဘောက် version 3.0.5 (မြန်မာပြန်) 3.65MB...
PowerISO 5.6.0.0 Final
Top Paid Android Apps Pack (235 Apps) Free Downloa...
Folder Protect 1.9.5 For Pc 3Mb...
My Backup Pro v3.3.3 for android(latest version).....
Battery Saver Du+Switch Widget v2.2.5.pro Apk 3MB....
Xilisoft Video Converter Ultimate v7.7.2 For Pc XP...
GameBoost 2.5.6.2013 Final Full Version (4MB ) ....
Memory Booster (Full Version) v5.5 for android...
IDM 6.15 build 11 +Patch....
WinRAR 5.00 Beta3Full Version ...
Kaspersky License Key (Jan-2014) အထိ....
Ringcut – Ringtone Maker v1.0.1 for Android.....
ဖုန်းကို လှပပြီး ကြည်လင်နေစေမယ့် Juice live wallpa...
Mydroid Tool V1.2(Installer) (71.85 Mb)
AndroVid Pro Video Editor v2.0.6 APK (7.34MB)........
Mobile AntiVirus Security PRO v3.2.2 for android(l...
ကွန်ပြုတာအတွက် Android ဆော့ဝဲ မလိုသော Viber....
Clean Master (Cleaner) v3.4.0 apk (3.18MB)
Windows8 / Windows 8 +Launcher v1.5.1 for android(...
Download Accelerator Plus Premium 10.0.5.3 (Update...
Call Recorder v1.3.9 for android(full version).......
မြန်မာ့ နည်းပညာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် Intel ရဲ...
ကီးမလိုတဲ့IDM 6.15....
Deep Freeze ဆိုသည်မှာနှင့် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်......
GSM/CDMA 800/WCDMA သုံးမျိုးလုံးသုံးနိုင်သည့် JAS ...
iOS 6.1.3 ကို redsn0w ဖြင့် Jailbreak လုပ်နည်း
iOS 6.1.3 နှင့် အထက် iOS များကို Update လုပ်ရန် စဥ...
Internet Download Manager အသုံးပြုတဲ့ သူများအတွက်....
၁၅၀၀ကျပ်တန် တယ်လီဖုန်းလိုင်းများသည် တာဝါတိုင်နှင့်...
Video Editor ၏ တတ်မြောက်ထားရမည့် အရည်အချင်းနှင့် အ...